Wasiirkii kalumaysiga oo ka jawabi la’ hantidii uu lunsady – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wasiirkii kalumaysiga oo ka jawabi la’ hantidii uu lunsady
(OW)Odayaasha iyo kaluumaysatada deegaanka Laas qoray ayaa qoraalo cabasho iyo ashkato ah oo ay degmadda Laasqoray ka soo saareen ku sheegay, in Wasiirka Kaluumaysiga cali Buureed uu lunsaday dhamaanba 11 matoor iyo 20 shabaagta kaluumaysiga ah oo dawladda Somaliland ugu deeqday dadka deegaankaa.
Warqado qoraal ah oo ay ku saxeexan yihiin odayaasha iyo masuuliyiinta iskaashato kaluun oo ka jirta deegaankaa oo lagu magacaabo Maakhir Coast Fishers, ayaa lagu sheegay, in qalabkaa ay wasaaradda maaliyadda Somaliland maalgelintiisa lahayd, isla markaana loogu deeqay kaluumaysatada Laas qoray, hase yeeshee sida cad qoraaladdaa oo nuqulo kamid ahin nosoo gaadheen, uu iibiyay dhamaantood Wasiirku, siday ku andacoonayaana uu ka iibiyay ganacsato reer Puntland ah. “wuxuu ka iibiyay Wasiirku ganacsato reer Puntland ah una dhashay gobolka Bari 11kii matoor iyo 20 kii shabagba, anagoo arkayna. Sidaay sharciga darteed waxaanu codsanaynaa in ciddii musuqmaasuqaa ku kacday sharciga la hor keeno. Laas qorayna sidii aad ku aragtay ayay weli ku sugan tahay Madaxweyne.” Sidaa wax yidhi Odayaasha iyo kaluumaysatada Laas qoray ee bayaanada qayla dhaanta ah ka soo saaray xatooyaddaa ay sheegeen in lagula kacay deeqdii dhinaca dawladda Somaliland uga timi.
Odayaasha iyo Kaluumaysatadu waxay intaa ku dareen oo ay ugu baaqeen Madaxweynaha, isla markaana ay ka codsadeen, inuu si dhakhso wax uga qabto arrintaa, dhacaasna dib loogu soo celiyo ayay yidhaahdeen, dadkii xaqa u lahaa.
Dhinaca kale deeqdan ayaa ka danbaysay socdaalkii uu madaxweynuhu ku tegay deegaankaa, isla markaana markii uu ku soo laabtay caasimaddaba waxa uu amray in deg deg looga jawaabo cabashadii jiiddaas oo loo diro deeq qalab kaluumaysi ah, taasoo ay bixisay Wasaaradda Maaliyaddu. Wasiirka Kaluumaysiga Cali Buurreed ayaa in muddo ahba jooga deegaankaa, mar aanu isku daynay in aanu wax ka waydiinana noomay suura gelin in aanu khadka isgaadhsiinta ku helo. Calasow Dheere oo ka soo jeeda qabiilka Majeerteen ayaa la sheegay inuu dillaal ka ahaa kala iibintii qalabkaa, sidaana waxa khadka telefoonka ugu sheegay wargeyska Ogaal Cali Muuse Jaamac oo ka mid ah kaluumaysatada Laas qoray.
Qoraaladdaa ay soo saareen Odayaasha iyo masuuliyiinta Kaluumaysatadu waxay u
Previous Shirkii Guuleed oo maanta la magcaabay shir guddoon
Next Shirkii xingallool ee Guleed siddii loogu tallo gallay ma u socdaa